जापानमा गर्भवति भएमा के गर्ने ? | Nepali In Japan
जापानमा गर्भवति भएमा के गर्ने ?
June 9, 2019 August 6, 2021
जापानमा पहिलो पटक गर्भवति हुने जापानी महिलाहरुका लागि पनिझन्झट हुने गरेको छ । विदेशी महिलाका नाताले केही कठिनाइहरु भोग्नु पर्छ । विशेषगरि भाषा, समय लगायतका कुराहरुले समस्या सिर्जना गर्नसक्छ । आजको लेखमा जापानमा गर्ववति भएपश्चात गर्नुपर्ने काम वा पूरा गर्नुपर्ने प्रकृयाबारे केही बताउने प्रयास गरिएको छ ।
१. अस्पताल भ्रमण
गर्भवति भएको शुरुआती लक्षण देखिनेवित्तिकै अस्पताल गएर स्त्रि रोग विशेषज्ञ चिकित्सकलाई देखाउनु पर्छ । गर्भ रहे नरहेको बारे घरमै जाँच गर्ने केही किटहरु उपलब्ध भएपनि ती सधैं सहि हुँदैनन् ।
२. गर्भवति भएको जानकारी र स्थानीय स्वास्थ्य कार्यालयबाट मातृशिशु स्वास्थ्यसम्बन्धी एक पुस्तिका लिने
जापानमा अस्पतालले तपाइ गर्भवति भएको बारे पक्का गरेपछि तपाइले स्थानीय महानगर कार्यालयमा गएर आफू गर्भवति भएको जानकारी दिनुपर्छ र त्यहाँ तपाइलाई एक मातृशिशु स्वास्थ्य पुस्तिका जारी गरिन्छ । यस्तो ह्याण्ड बुकको शुरुआत जापानबाट भएको भएपनि आजकाल यो ३० ओटा भन्दा धेरै राष्ट्रमा प्रयोग हुन्छ । यसले गर्भवति महिला र बच्चाको स्वास्थ्य अवस्थाबारे रेकर्ड राख्छ । यो विभिन्न भाषामा उपलब्ध छ ।
३.बच्चाको जन्मका लागि अस्पतालको खोजी
यो केही आश्चर्यजनक लाग्न सक्छ जापानमा गर्भवति महिलाले गर्भवति हुनेवित्तिकै बच्चाको जन्मका लागि अस्पतालको छनौट गर्छन् । कहिलेकाहिँ अन्तिम समयमा रिजर्भेशन गर्न कठिन हुन सक्ने भएकाले गर्भवति भएको १ हप्तातिर अस्पतालको खोजी गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि आफुलाई पायक पर्ने र नजिकैको अस्पताल रोज्न सकिन्छ ।
४.बच्चाको जन्मका र यससम्बन्धी प्रकृयाका लागि लम्प सम एलाउन्सेसको खोजी
जापानमा वच्चा जन्माउनको लागि लगभग ५० मान येन लाग्दछ तर स्वास्थ्य बीमा गरेको खण्डमा सुत्केरी भत्ता रकम करीव ४२ मान जति भुक्तानी फिर्ता पाईने हुँदा केही मात्रामा राहत हुने हुन्छ । यसको लागि अस्पतालको सोधपुछ शाखामा अग्रिम प्रक्रिया गर्नुहोला ।यो पाउनका लागि तपाइ राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा वा कर्पोरेट स्वास्थ्य बीमाको सदस्य हुनुपर्छ । विदेशीका लागि जापानमा बसाइ अवधिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । त्यसले सबै कुराबारे पहिल्यै जाँच गर्ने र आवेदन गर्न पनि बिर्सनु हुँदैन ।
५.आमा र अभिभावकसम्बन्धी कक्षा लिने
वच्चा जन्मेपछि कसरी स्याहार सुसार गर्ने भनेर विभिन्न किसिमका तालिमहरु पनि वडा कार्यालयहरुले उपलब्ध गराउँछन् । त्यस तालिममा तपाइँले भाग लिनुपर्ने हुन्छ । यी कक्षामा गर्भवति भएको समयमा आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल कसरी राख्ने, शारिरिक व्यायाम, र बच्चाको देखभाल कसरी गर्ने भन्नेबारे कुराहरु सिकाइन्छ । अस्पताल र महानगरपालिकाले प्रयोजन गरेका बाहेक निजी कर्पोरेशनले प्रायोजन गरेका कक्षाहरु पनि सञ्चालन गरिन्छ । यहाँ अन्य गर्भवति महिलाहरुसँग पनि भेट हुने भएकाले जानकारी आदान प्रदान गर्न पनि सकिन्छ । साथै अभिभावक कक्षाहरु पनि सञ्चालन भइरहकेका छन् । यहाँ हुनेवाला पिताहरुले पनि थुप्रै कुराहरु सिक्छन् । साथै हुनेवाला पिता मात्रै सहभागि हुने कक्षाहरु पनि पाइन्छन् । आफूलाई जुन सहज लाग्छ त्यहि कक्षा लिन सकिन्छ ।
६.अस्पताल भर्ना र बच्चाको जन्म
अस्पताल भर्ना हुनु अगाडि नै सम्पर्ण आवश्यक सामानहरुको जोहो गरिसक्नुपर्छ । यसमा चारओटा कुराहरु ल्याउन छुटाउनु हुँदैन । यसमा मातृशिशु स्वास्थ्य पुस्तिका, स्वाथ्स्य बीमा कार्ड र अस्पतालको विरामी कार्ड र तपाइको हाङ्को । अन्य ल्याउनुपर्ने सामान अस्पतालपिच्छे फरक फरक हुन्छ । त्यसैले यसको तयारी अगाडि नै गर्नुपर्छ ।
विदेशी भूमीमा बच्चा जन्माउनु र हुर्काउनु पक्कै पनि कठिन काम हो तर आवश्यक सबै प्रक्रियाहरुका बारेमा अग्रिम जानकारी लिइराख्नुभयो भने धेरै समस्या आउँदैनन । आशा गछौं यो जानकारी तपाईका लागि उपयोगी रह्यो, अरुलाई पनि काम लाग्नसक्छ त्यसैले सेयर गर्न नभुल्नुहोला है ।
जापानमा बच्चा जन्माउन कति खर्च लाग्छ ?
Prevयि हुन रोबोट भेट्न जाने पाँच ठाउँहरु
Nextजापानमा रहेका क्वाइन लकरहरु कसरी प्रयोग गर्ने ?